Ihe efu ị ga -eme ebe ndebe akwụkwọ - IntoKildare
Kasị Mma nke KildareNwee ezumike ezinụlọNa-eje ije & HikingGolfIhe Nwere Ike ImeBọchị mmiri ozuzoIhe Zoro EzoOchie Anyanwụ nke IrelandỤzọ ụkwụCommunity
Arts & Omenala
Banlọ Ọrụ Artsbank
Adventure & Ihe
Abbeyfield Ugbo Ala Na-achụso
Ihe nketa na akụkọ ihe mere eme
Brigzọ St Brigid
Omume kachasị mma na Kildare
Ije asaa na ije na Kildare
Zụ ahịa na Kildare
Onye na-agba ịnyịnya Kildare
Gallop Site na Heartland nke Equestrian Ireland
Irish National Stud & Ogige ndị Japan
Hụ ihe niile ị ga-eme
Ụlọ ahịa Gastro-PubEzi nriNri oriri n’èzíEgwu dị egwuN'ehihie Tea
Pubs & Ndụ abalị
Votu: Kildare Kachasị Mma Nke Guinness
ụlọ oriri na ọṅụṅụ
Ihe oriri Co Kildare kachasị na ndepụta ịwụ ịwụ
Ebe Uri Na-eri nri n'èzí kachasị mma na Kildare
Kildare kacha mma Brunch Spots
Jụọ mpaghara: Ebee ka ụlọ ahịa kọfị kacha mma nke Kildare dị
Hụ nri niile na ihe ọ Dụ Dụ
Leslọ na Histlọ Akụkọ Mere Emeokomokommefu egoEzigbo ezinụlọElslọ nkwari akụ nwere ọdọ mmiriHotlọ nkwari akụ SpaPet FriendlyEbe Agbamakwụkwọ
Ụlọ Carton, ụlọ oriri na ọ Fairụ Hotelụ Fairmont Managed
Isiri onwe nri
Lavender Ulo Onwe Onwe
Ulo obibi kacha mma na Kildare
Maa ụlọikwuu Kildare
Forest Farm Caravan & Ogige
Ime ụlọ naanị
Lee Ulo obula
Broshọ njem nlegharị anya County Kildare
Oge na Kildare
Map nke Kildare
Ihe Nwere Ike Ime
Ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ịga leta ọtụtụ ebe nkiri Kildare. Ọtụtụ n'ime ha nweere onwe ha ịbanye, enwere ọtụtụ mmemme na ahụmịhe na -atọkwa ụtọ. Nyocha ụlọ, ụlọ ngosi ihe mgbe ochie, ebe a na -ese ihe na ihe ndị ọzọ, niile n'efu, n'ụbọchị na -agaghị ahapụ gị n'akpa. Ọ dị anyị!
Lelee ụfọdụ ebe nlegharị anya n'efu nke Kildare, ka ịchọta ọtụtụ ihe ị ga -eme n'emebighị akụ. Site na saịtị nketa, ruo n'ugbo anụ ụlọ, ihe okike na ebe ngosi nka nke ejiji, a ga -enwerịrị ihe maka mmadụ niile.
Okwesiri Clane Maynooth Naas Kildare Newbridge Celbridge Leixlip obodo barretstown Monasterevin Rathangan Sallins Ardclough
N'ihe banyere mgbochi Covid-19, ọtụtụ ihe na mmemme na Kildare nwere ike ịbụ na echere ma ọ bụ kagbuo ma ọtụtụ azụmaahịa na ebe enwere ike mechie nwa oge. Anyị na-akwado gị ka ị tụlee azụmaahịa na / ma ọ bụ ebe dị mkpa maka mmelite kachasị ọhụrụ.
18 nsonaazụ (s)
Tinye ka ọkacha mmasị
Jiri obi ụtọ na-agagharị n'ehihie, otu ụbọchị ma ọ bụ ezumike ezumike izu ụka na-agagharị na mmiri kachasị hụ Ireland, na-enwe ihe na-adọrọ mmasị n'akụkụ ọ bụla na towpath a dị afọ 200.
Nweta ịma mma nke Castletown House na parklands, a Palladian mansion na County Kildare.
Okporo ụzọ ihe nketa nke Celbridge
Chọpụta Celbridge na Castletown House, ebe obibi maka ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ na ụlọ akụkọ ihe mere eme jikọtara ọnụ ọgụgụ dị ịrịba ama nke oge gara aga.
O nwere ike ịbụ traktị kacha ochie na nke kachasị ukwuu nke ahịhịa ahịhịa na Europe na saịtị nke ihe nkiri 'Braveheart', ọ bụ ebe a na-ewu ewu maka ndị bi na ndị ọbịa.
Canzọ Ọwara Ukwu
Nnukwu okporo ụzọ ahụ na-eso ụzọ ụzọ ahịhịa jupụtara na ahịhịa na okporo ụzọ akwara tarmac ruo Shannon Harbor.
Ememme Fest June na -ewetara Newbridge ihe kacha mma na nka, ụlọ ihe nkiri, egwu na ntụrụndụ ezinụlọ.
Ụlọ ihe ngosi nka Kilcock
Kildare's premier gallery kemgbe 1978, na-egosipụta nka nke ọtụtụ ndị Irelands guzobere.
Kildare Derby Akụkọ Ifo
Jee njem Derby 'njem' karịrị 12 furlongs, na-eso na hoofprints nke akụkọ mgbe ochie Ireland na-agba ọsọ ịnyịnya ma ama, The Irish Derby.
Kildare Farm Foods Open Farm & plọ ahịa
Ezigbo ahụmịhe ezinụlọ nwere mmekọrịta enyi na enyi, ebe ị ga-ahụ ụdị anụmanụ dịgasị iche iche na mpaghara okike na izu ike.
Ọrụ Ọbá akwụkwọ Kildare
Ọrụ Ọbá akwụkwọ Kildare nwere ọbá akwụkwọ n'obodo ukwu niile nke Kildare ma na -akwado ọba akwụkwọ oge 8 n'akụkụ mpaghara niile.
Otu obere dịpụrụ adịpụ na mpụga Obodo Rathangan bụ otu n'ime ihe nzuzo nzuzo kachasị mma nke Ireland maka okike!
Iguzo n'ọnụ ụzọ nke Mahadum Maynooth, mbibi nke narị afọ nke 12, bụbu ebe siri ike na ebe obibi bụ isi nke Earl nke Kildare.
Osisi Moore Abbey
Osisi agwakọtara nwere nhọrọ nke ụzọ ụkwụ na saịtị nke ebe obibi ndị mọnk nke narị afọ nke 5 nke St Evin guzobere na ihe na-erughị 1km site na Monasterevin.
Ụzọ akụkọ ihe mere eme nke Naas
Nwee mgbagharị gburugburu okporo ụzọ akụkọ ihe mere eme nke Naas wee mepee akụ zoro ezo nke ị nwere ike ịmabeghị n'ime obodo Naas Co. Kildare.
Famzọ Famnwụ Mba
167zọ njem 1,490km na-agbaso nzọụkwụ nke ndị bi na XNUMX ndị a manyere ịkwaga na Strokestown, na-agafe County Kildare na Kilcock, Maynooth na Leixlip.
Ngwongwo ọla ọcha Newbridge
Newbridge Silverware Visitor Center bụ a dịkọrọ ndụ Shopper si paradise featuring ama Museum nke Style Oyiyi na pụrụ iche Factory Tour.
Pollardstown Fen na-enye ije pụrụ iche na ala pụrụ iche! Soro njem site na fen iji nweta hectare 220-heal nke alkaline peatland dị nso.
Brigzọ St Brigid na-agbaso nzọụkwụ nke otu n'ime ndị nsọ anyị hụrụ n'anya kachasị mma site na obodo Kildare wee chọpụta ụzọ akụkọ ọdịnala a iji chọpụta ihe St Brigid ketara.
Nri na Ṅụọ
Ozi bara uru
Nyefee Ihe Omume
Soro anyị maka mkpali na ndụmọdụ si Kildare
Debanye ugbu a
IntoKildare © 2022 - Site site na zuru oke | amụma nzuzo
Akwụkwọ ndekọ mmekọrịta
Anyị na-elekọta na Kildare
Ọkacha mmasị m
Jikọọ ndị ọrụ ahụ
Nweta ozi ọhụụ niile, ndụmọdụ, nkwalite na ndị ọzọ
* Site na ịbanye, ị kwenyere nke anyị amụma nzuzo ma nata ozi-e anyị
Ebe nrụọrụ weebụ a na-eji kuki iji mee ka ahụmịhe gị ka mma. Anyị ga-eche na ị dị mma na nke a, ma ị nwere ike ịpụ apụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ.Nabata Jụ amụma nzuzo